IiLofts zeMbali zeHavana ~ ILoft yeBhanki yaseMzantsi ~ Edolophini
ISouth Bank Loft inesitudiyo esikhulu, esivulekileyo sendawo yokuhlala ephawulwe ngumgangatho ohonjisiweyo ukuya kwiifestile ezijonge kwiSitrato esiyimbali eHavana, eIllinois.
Indawo ibuyiselwe ngobuchule kwaye inesilingi eziphakamileyo ezilishumi elinambini, ukubunjwa kwesithsaba esibuyiselweyo, izitena eziveziweyo kunye nomgangatho wokuqala wemaple womthi oqinileyo. Igumbi eliphakamileyo likwabonisa ikhitshi elineekhabhathi eziphezulu, i-tile yesiko elingasemva kunye nokukhanya kwekhabhathi.
Ukuze ube lula kwaye uyonwabele ikhitshi libandakanya ifriji yewayini engenastainless, imicrowave, imbiza yekofu kunye nezinto eziyimfuneko zasekhitshini.
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo linomgangatho oqhelekileyo weethayile, isinki enkulu yeenyawo kunye nebhafu egcweleyo eneshawari.
I-Loft yeBhanki yaseMzantsi ibonakalisa ubungakanani bendlovukazi, yanamhlanje, ibhedi ye-canopy kwindawo enkulu evulekileyo yesitudiyo. Ikwanegumbi lokuhlala elichongiweyo eliqhelekileyo, indawo yokuhlala ebandakanya ibhedi enendawo yokulala yokutsala.
I-loft yindawo enkulu, evulekileyo, eqaqambileyo, ehonjiswe ukubonisa ukubaluleka kwembali yesakhiwo sebhanki ye-1880 ngelixa uhambisa ezona zinto ziluncedo zanamhlanje kwindawo yokulala ye-boutique.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zive zithotyiwe kwaye zikhathalelwe kwi-Historic Havana Lofts, kwaye yiyo loo nto sithathe ixesha lethu kungekuphela nje ekubuyiselweni kwendawo, kodwa nakwizinto esizibonelela ngazo, kubandakanya oomatrasi, ubunewunewu. iibhedi zehotele kunye neetawuli kunye nombane okhawulezayo wesantya se-intanethi.
Sifuna ukuba uphumle kwaye wonwabele indawo entle esiyidalileyo, kwaye sijonge ukukubamba eHaana, e-Illinois, ke nceda, yiba lundwendwe lwethu.
Jonga incwadi yam yesikhokelo malunga neengcinga ezininzi malunga nezinto ekufuneka zenziwe eHavana kunye nengingqi engqongileyo kubandakanya, ukuthenga, ukutya, imbali, imithombo yendalo, ukungcamla iwayini, nokunye okuninzi!
*Ukuhamba nesinye isibini, usapho okanye abahlobo? Qasha iindawo eziphezulu kunye! I-Historic Havana Lofts ibonisa i-Loft yeBhanki yaseMzantsi kunye ne-North Bank Loft, nganye inebhedi yobukhulu bokumkanikazi kunye nobukhulu obugcweleyo bokukhupha ibhedi yesofa. Singakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu abane kwiloft nganye.
*Nangona singakuvumeli ukuba kuqeshwe iilofts ukwenzela amaqela, siyazi ukuba indawo yethu ifanelekile kwimisitho emininzi emincinci. Siyazivumela iindawo eziphakamileyo ukuba ziqeshelwe ubusuku bamantombazana, iindawo zokulala, iishawari ezincinci zomtshakazi kunye nezabantwana, kunye nokuba abatshakazi kunye nabayeni bazilungiselele ngosuku lwabo olukhethekileyo kwaye basebenzise njengendawo yabo yomtshato. Ukukhanya kunye neempawu zesakhiwo zenza indawo efanelekileyo yeefoto ezikhethekileyo.
IiLofts zeMbali zeHavana zisembindini weDowntown Havana Illinois kwisitalato esikhulu. Idolophu yethu yomlambo encinci iye yafumana umzamo omkhulu wokuvuselela kule minyaka mine idlulileyo, kwaye sinenkangeleko entsha entle edolophini eqaqambisa izitrato zethu zembali ezibomvu kwaye ineendlela ezintsha zepavumente, iindawo zokuhombisa zokuhombisa kunye nembonakalo entle yomhlaba. Iindawo eziphakamileyo zibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neendawo zokutyela ezininzi ezithandwayo, zonke iindawo zethu zokuthenga ezintsha kunye neGadi yeBeer yesitalato esikhulu.
Njengabamkeli bakho, siya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye ukuphatha nayiphi na imiba enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho nathi. Nangona sihlala malunga neekhilomitha ezingama-25 ukusuka kumbindi wedolophu yaseHavana, sihlala edolophini kwaye sifumaneka ngokulula.
Njengabamkeli bakho, siya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye ukuphatha nayiphi na imiba enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho nathi. Nangona sihlala malunga neekhi…